वाह! अब तपाइँको संयुक्त राज्य अमेरिका बाट यूरोप बाट Lufthansa उडान बुक गर्नुहोस्
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » उड्डयन » वाह! अब तपाइँको संयुक्त राज्य अमेरिका बाट यूरोप बाट Lufthansa उडान बुक गर्नुहोस्
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • उड्डयन • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • पर्यटन • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
अमेरिकी यात्रा प्रतिबन्ध को योजनाबद्ध अन्त्य को एक हप्ता पछि, Lufthansa समूह एयरलाइन्स संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी उडानहरु को लागी एक उछाल को अनुभव गरीरहेको थियो।
पछिल्लो हप्तामा केहि दिनहरुमा, अटलांटिक मा उडानहरु हप्ता भन्दा पहिले तीन गुणा बढ्यो। केहि मार्गहरु मा पछिल्लो हप्ता मा मांग लगभग पूर्व संकट पुग्यो
स्तरहरु। ज्यूरिख र लुफ्थान्सा बाट फ्रैंकफर्ट बाट न्यूयोर्क र फ्रैंकफर्ट र ज्यूरिख बाट मियामी सम्म SWISS संग उडानहरु दुबै फुर्सत र व्यापार यात्रीहरु बाट उच्चतम बुकिंग थियो। प्रीमियम इकोनोमी मा, संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी बिजनेस र प्रथम श्रेणी को टिकटहरु २०१ in मा उही अवधि को तुलना मा किनेका थिए।
लुफ्थान्सा समूह, अमेरिकी यात्रा प्रतिबन्ध को योजनाबद्ध अन्त्य को एक हप्ता पछि
एयरलाइन्सहरु संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी उडानहरु को लागी एक थप उछाल अनुभव गरीरहेछन्। निश्चित मा
पछिल्लो हप्ता मा दिनहरु, एट्लान्टिक भर मा उडानहरु को तुलना मा तीन गुणा बढ्यो
केहि मार्गहरु मा पछिल्लो हप्ता मा मांग लगभग पूर्व संकट पुग्यो
स्तरहरु। ज्यूरिख र लुफ्थान्सा फ्रैंकफर्ट बाट न्यूयोर्क को लागी SWISS संग उडानहरु
र फ्रैंकफर्ट र ज्यूरिख बाट मियामी दुबै फुर्सत बाट उच्चतम बुकिंग थियो
र व्यापार यात्रीहरु।
प्रीमियम इकोनोमी मा, बिजनेस र प्रथम श्रेणी को संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी टिकटहरु २०१ in मा उही अवधि को तुलना मा किनेका थिए।
Lufthansa समूह अतिरिक्त शुरू गरेर पेन्ट अप मा यो बूम पूरा गरीरहेको छ
छोटो सूचना मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी उडानहरु। Lufthansa र SWISS, उदाहरण को लागी, मियामी को लागी तीन दैनिक उडानहरु को एक संयुक्त कुल मा छोटो सूचना मा प्रस्ताव गरीनेछ।
त्यहाँ आगामी डिसेम्बर को लागी संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी उडानहरु को लागी धेरै बलियो माग छ। नयाँ
यस महिना को लागी पछिल्लो हप्ता मा बुकिंग को रूप मा उनीहरु को लागी 2019 को लागी उच्च थियो
एउटै समय अवधि। न्यूयोर्क को लागी उडानहरु - परम्परागत रूपमा उच्च माग मा
क्रिसमस को मौसम - पहिले नै अतिरिक्त कनेक्शन संग बलियो गरीएको छ।
लुफ्थान्सा समूह को एयरलाइन्स लाई ५५ सम्म साप्ताहिक कनेक्शन को पेशकश गरीरहेको छ
अस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी र मा आफ्नो विभिन्न यूरोपीय केन्द्रहरु बाट न्यूयोर्क
डिसेम्बर मा स्विट्जरल्याण्ड। सेवाहरु को एक छोटो अवधिको विस्तार वर्तमान मा छ
न्यूयोर्क र शिकागो मात्र एक्लै, लुफ्थान्सा समूह एयरलाइन्स यूरोप बाट नोभेम्बर मा सम्पूर्ण एशिया प्रशान्त क्षेत्र को लागी उडानहरु को तुलना मा अधिक दैनिक कनेक्शन प्रदान गर्दछ।
लुफ्थान्सा समूहले आशा गर्दछ कि अमेरिका खोल्ने ईयू यात्रीहरु को लागी खुल्ला छ
अन्य देशहरु र क्षेत्रहरु को लागी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा लाई फेरि सजिलो बनाउन र यात्रा प्रतिबन्धहरु लाई रोल गर्न को लागी एक संकेत हुनेछ।
जर्मनी भित्र पनि अतिरिक्त उडानहरु
लुफ्थान्सा समूहले आफ्नो युरोपेली केन्द्रहरुमा जर्मन आन्तरिक उडानहरु पनि बढाउँदै छ
अमेरिकी उडानहरु को लागी माग बढ्न जारी छ। उदाहरण को लागी, जुलाई संग तुलना,
लुफ्थान्साले आन्तरिक जर्मन उडानहरु ४५ प्रतिशतले बढाइरहेको छ
कात्तिक। यसको मतलब, अन्य चीजहरु को बीच मा कि अक्टोबर को रूप मा त्यहाँ नौ को सट्टा फ्रान्कफर्ट बाट बर्लिन दैनिक flights उडान हुनेछ। फ्रैंकफर्ट बाट ह्याम्बर्ग सम्म उडानहरु दैनिक छ देखि आठ उडानहरु सम्म बढ्नेछन्। स्थिति म्यूनिख को लागी समान छ:
बर्लिन को वर्तमान पाँच दैनिक कनेक्शन मा शुरू बाट सात मा वृद्धि गरीनेछ
अक्टोबर; सट्टा म्यूनिख बाट ह्याम्बर्ग को लागी छ दैनिक उडानहरु को लागी, त्यहाँ सम्म हुनेछ
भविष्य मा 11 दैनिक उडानहरु। र अक्टुबर मा शुरू हुदै लुफ्थान्सा फेरि ह्याम्बर्ग र बर्लिन बाट बिहान र बेलुका फ्रैंकफर्ट र म्यूनिख मा यसको केन्द्रहरु को लागी प्रति घन्टा उडानहरु संचालित हुनेछ।
उडान तालिका विस्तार संगै, अधिक जडान भर मा उपलब्ध छन्
दिन। यो व्यापार यात्री जो अक्सर बिहान वा मा उडान गर्न चाहनुहुन्छ मतलब छ
बेलुका अन्य यात्रुहरु जस्तै एक सुधारिएको उडान तालिका बाट लाभान्वित हुनेछ।